❤️ Instagram ले मलाई लग इन गर्न दिदैन : मर्मत गाइड - Winches क्लब
इन्स्टाग्राम एक शक्तिशाली सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो, रचनात्मक फोटो र भिडियो पोस्ट गर्न र साथीहरु र परिवार के गर्न को लागी हेर्न को लागी हरेक दिन लाखौं मानिसहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ प्रभावशाली व्यक्तिहरु. धेरै कम्पनीहरु लाई साइट को उपयोग गर्न को लागी आफ्ना अनुयायीहरु संग सामग्री साझा गर्न को लागी र आफ्नो व्यवसाय लाई बढाउन को लागी।.
यो अविश्वसनीय रूप मा निराश छ तपाइँको संग जोड्न को लागी सक्षम छैन इन्स्टाग्राम खाता, तर सत्य यो हो कि धेरै मानिसहरु एक दैनिक आधार मा यो स्थिति को अनुभव छ. त्यहाँ यो घटना को लागी धेरै सम्भावित व्याख्याहरु छन्.
धेरै प्रभावकारीहरु, उद्यमीहरु र व्यवसायहरु इन्स्टाग्राम एक व्यापार मंच को रूप मा प्रयोग गर्नुहोस्. जब उनीहरु आफ्नो खातामा पहुँच गर्न सक्दैनन्, यसले व्यावसायिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्छ, सामाजिक मिडिया उपस्थिति र पनि आय.
सौभाग्य देखि, त्यहाँ सामान्यतया धेरै समस्याहरु को लागी एक सजिलो समाधान छ. यो गाइड मा, तपाइँ कसरी तपाइँको इन्स्टाग्राम खाता मा पुन: जडान गर्ने बारे मा जानकारी पाउनुहुनेछ.
इन्स्टाग्राम जडान त्रुटि सन्देश
यदि तपाइँ एक त्रुटि सन्देश पाउनुहुन्छ कि तपाइँलाई सूचित गरीरहेछ कि तपाइँको जडान प्रयास असफल भयो, तपाइँको पहिलो विकल्प तपाइँको पासवर्ड पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्. यदि त्यो काम गर्दैन, यसको मतलब त्यहाँ तपाइँको खाता संग अर्को समस्या छ.
जब तपाइँको जडान को प्रयास असफल भयो, तपाइँ विभिन्न त्रुटि सन्देशहरु मध्ये एक प्राप्त गर्ने सम्भावना छ, कहिलेकाँही सिधै तपाइँको फोन र कहिले काहिँ तपाइँको ईमेल को लागी. कुनै एक अप्रत्याशित त्रुटि सन्देश प्राप्त गर्न मनपर्छ, तर लाभ यो हो कि यो सन्देश तपाइँ तपाइँ एक संकेत गर्न को लागी तपाइँ जडान गर्न असफल हुनुको कारण दिन्छ.
यहाँ इन्स्टाग्राम को सबै भन्दा साधारण लगइन विफलता सूचनाहरु को केहि छन्:
माफ गर्नुहोस्, तपाइँको अनुरोध संग एक समस्या थियो.
नाम इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता भेटिएन.
हामी तपाइँको खाता मा लग इन गर्न सक्दैन.
कृपया तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम जाँच गर्नुहोस् र पुन: प्रयास गर्नुहोस्.
विरुद्ध को लागी पासवर्ड बिर्सनुभयो “प्रयोगकर्ता नाम” ?
नाम तपाइँले प्रविष्ट गर्नुभएको प्रयोगकर्ता एक खाता संग सम्बन्धित छैन.
यो भन्दा पहिले हामी कसरी यी मुद्दाहरु लाई ठीक गर्न मा delve, पहिले कनेक्शन त्रुटि को लागी सम्भावित कारणहरु लाई हेरौं. इन्स्टाग्राम त्रुटि सन्देशहरु सामान्यतया तपाइँ समस्या र यसको समाधान को सम्भावित कारण को रूप मा एक राम्रो सुराग दिनुहुन्छ।.
एक जडान विफलता को सम्भावित कारणहरु
एक लगइन विफलता को लागी सबैभन्दा सामान्य कारण हो कि तपाइँ गलत पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुभयो, जुन धेरै पटक हुन्छ. यो एक साधारण टाइपो हुन सक्छ, एक प्रविष्टि त्रुटि को (ठूलो वा सानो अक्षर), वा पनी बिल्कुल गलत पासवर्ड. जाँच गर्नुहोस् कि तपाइँको पासवर्ड सही छ, र यदि यो एक पासवर्ड समस्या हो, द्वारा प्रदान गरिएको रिसेट पासवर्ड लिंक को उपयोग गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम.
इन्स्टाग्राम लगइन त्रुटिहरु प्राय: एक नयाँ उपकरण मा पहिलो लगइन द्वारा ट्रिगर छन्. जब प्लेटफर्म उपकरण तपाइँ प्रयोग गरीरहनुभएको छैन, यसले तपाइँलाई यो पहुँच गर्न बाट रोक्न सक्छ जब सम्म तपाइँ एक अतिरिक्त जाँच प्रदर्शन गर्नुभएको छ.
यद्यपि यो प्रक्रिया असुविधाजनक र अनावश्यक लाग्न सक्छ, यो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम हो. यदि कसैले आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता हैक गर्न को लागी आफ्नै उपकरण को उपयोग गरेर साइन इन गर्न को लागी कोशिश गर्दछ, यो कदम उसलाई रोक्न सक्छ. अतिरिक्त प्रमाणिकरण सुनिश्चित गर्दछ कि सुरक्षा र तपाइँको खाता को गोपनीयता संरक्षित छन्.
अन्य उपकरण सम्बन्धित जडान मुद्दाहरु एक पुरानो उपकरण को उपयोग गरीरहेछ जो अब इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग लाई समर्थन गर्दछ, साथै उपकरण मा गलत मिति र समय सेटिंग्स.
बेलाबेलामा, तपाइँको फोन मा एक मेमोरी वा हार्डवेयर समस्या आवेदन को संचालन लाई प्रभावित गर्न सक्छ. डाटा र Wi-Fi जडान दोषी हुन सक्छ, र या त एक तपाइँको उपकरण र इन्स्टाग्राम सर्भर को बीच एक संचार समस्या को कारण हुन सक्छ.
असफल लगइन को लागी एक अन्तिम सम्भावित कारण अवरुद्ध वा तपाइँको इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने हो।. तपाइँ यो आफैं गर्न सक्नुहुन्छ, गल्तीले पनि. यो पनि सम्भव छ कि कसैले तपाइँको खाता ह्याक गरेको छ वा इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म अस्थायी रूपमा तपाइँको ब्लक गर्न को लागी एक कारण थियो तपाइँको खाता मा पहुँच.
कसरी तपाइँको इन्स्टाग्राम खाता मा पुन: जडान गर्ने मा एक गाइड
अब इन्स्टाग्राम लगइन विफलताको समाधान मा एक नजर राख्ने समय हो. एक पटक तपाइँ एक त्रुटि सन्देश प्राप्त गर्नुभएको छ र कारण मा केहि विचारहरु छन्, तपाइँ तलका विधिहरु कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ.
ती मध्ये धेरै छिटो फिक्स छन्, तर केहि समस्या को पहिचान गर्न र समाधान खोज्न को लागी थोरै समय र प्रयास लिन सक्छ. तपाइँ पनी इन्स्टाग्राम ग्राहक सेवा लाई सम्पर्क गर्न को लागी वा तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी एक बाह्य अनुप्रयोग पाउन को लागी आवश्यक हुन सक्छ।.
यहाँ केहि छिटो फिक्स छन् कि तपाइँ समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ:
एक छोटो ब्रेक लिनुहोस् र तपाइँको पासवर्ड पुनर्विचार गर्नुहोस्
यदि तपाइँ उही पासवर्ड संग फेरि लग इन गर्न कोसिस गर्नुभयो, एक ब्रेक ले तपाइँलाई तपाइँको पासवर्ड को बारे मा केहि याद गर्न मद्दत गर्न सक्छ. अन्यथा, मात्र इन्स्टाग्राम मा रिसेट पासवर्ड लिंक को उपयोग गर्नुहोस्.
तपाइँको यन्त्र खोल्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्
पुनः सुरु एक द्रुत फिक्स हो कि सामान्यतया राम्रो काम गर्दछ. यो पनि उपकरण र अनुप्रयोग सर्भर को बीच कनेक्टिविटी मुद्दाहरु लाई हल गर्न सक्नुहुन्छ।. प्राय, जब हामी हाम्रो उपकरणहरु धेरै धेरै प्रयोग गर्दछौं, अनुप्रयोगहरु malfunction को लागी शुरू हुन सक्छ, त्यसैले पहिले यो कदम कोसिस गर्नुहोस्.
आफ्नो जडान जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाइँको फोन डाटा वा वाइफाइ चालू छैन, तपाइँ लग इन गर्न सक्नुहुन्न. प्राय, तपाइँको जडान विफल हुन्छ तपाइँलाई यो महसुस नगरीकन. एक कमजोर वा आंतरायिक जडान पनि जडान गर्न को लागी तपाइँको क्षमता लाई प्रभावित गर्न सक्छ।. तपाइँ तपाइँको Wi-Fi राउटर पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ सर्भर मा जडान को बारे मा एक त्रुटि सन्देश पाउनुहुन्छ.
तपाइँको उपकरण को समय र मिति सेटिंग्स अपडेट गर्नुहोस्
तपाइँ गलत समय र मिति सेटिंग्स संग एक नयाँ वा फरक उपकरण मा हुन सक्छ. यो पनि सम्भव छ कि यी सेटिंग्स तपाइँको सामान्य उपकरण मा गल्ती बाट परिवर्तन गरीएको छ।. यी त्रुटिहरु इन्स्टाग्राम मा लग इन गर्न को लागी तपाइँको क्षमता लाई प्रभावित गर्दछ. जाँच गर्नुहोस् कि सेटिंग्स सही छन् र यदि आवश्यक छ भने अपडेट गर्नुहोस्. सबै भन्दा राम्रो विधि स्वचालित रूपमा समय र मिति सेटिंग्स अपडेट गर्न छनौट गर्न को लागी हो.
अनुप्रयोगको क्यास र डाटा खाली गर्नुहोस्
यदि त्रुटि आवेदन बाटै आउँछ, अक्सर क्यास सफा गर्न समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो अवस्थामा, तपाइँ उपकरण सेटिंग्स मा जानु पर्छ. आवेदन सेटिंग्स मा, तपाइँ इन्स्टाग्राम चयन गर्न सक्नुहुन्छ र क्यास र डाटा खाली गर्न को लागी विकल्प छनौट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाइँ आफ्नो पीसी वा अन्य यन्त्र बाट साइन इन गर्न को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ त्यहाँ तपाइँको खाता पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।.
इन्स्टाग्राम जडान समाधान माथि वर्णित सबै भन्दा सजिलो र छिटो वरपर केहि छन्।. समस्या को बहुमत यी संग हल गर्न सकिन्छ. यदि तपाइँ अझै पनी तपाइँको खाता मा लग इन गर्न सक्नुहुन्न, तपाइँ एक अधिक उन्नत समाधान को आवश्यकता हुन सक्छ.
तपाइँको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्
यदि तपाइँ सही पासवर्ड याद गर्न सक्नुहुन्न भने तपाइँ तपाइँको पासवर्ड रिसेट गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।. यो केहि मिनेट लाग्छ, तर यो अक्सर राम्रो काम गर्दछ.
आवेदन अपडेट गर्नुहोस्
अर्को समाधान तपाइँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ अनुप्रयोग अपडेट गर्न को लागी हो. जब तपाइँको अनुप्रयोग मिति बाहिर छ, यो अब राम्रो संग प्रदर्शन गर्दछ र यो हुनु पर्छ र नवीनतम सुविधाहरु र प्रकार्यहरु छैन.
तपाइँको फेसबुक खाता संग लग इन गर्नुहोस्
तपाइँ पनि तपाइँको फेसबुक खाता संग लगइन गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. यदि यी सबै प्रयासहरु असफल भए, तपाइँको सबैभन्दा राम्रो मौका इन्स्टाग्राम लाई सम्पर्क गर्न को लागी हो र उनीहरुलाई सोध्न को लागी तपाइँ खाता को मुद्दा को समाधान गर्न को लागी.
अघिल्लो लेखकसरी थाहा पाउने यदि कसैले तपाइँलाई इन्स्टाग्राममा ब्लक गरेको छ
अर्को लेखजब इन्स्टाग्राम मा पोस्ट गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो ?